टर्की मा टर्की र टर्की मा मौसम
तुरून्त मौसम टर्की
देशको बिभिन्न क्षेत्रहरूमा जग्गा क्षेत्रहरू
जहाँ मेमा टर्कीमा आराम गर्न
टर्कीमा टर्कीमा छुट्टीहरू: कसरी उपयोगी
मेमा टर्कीमा मौसम
एयर तापमान र पानी
मेमा, पर्यटन मौसम भर्खरै सुरु हुन्छ। तर टर्कीमा मौसम पहिले नै गर्मी र तातो छ, तपाईं पहिले नै सनब्रुच र दक्षिणी किनारमा पौडी खेल्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ, आराम गर्ने प्रेमीहरूको लागि माईलाई पूर्ण रूपमा फिट हुनेछ, समुद्री किनारमा र होटेलमा पर्याप्त कम हुन्छ, र मूल्यहरू अझै पनि वफादार हुन्छन्।
मेमा, टर्की पहिले नै न्यानो र घाम छ। यो विरलै विरलै रूपमा, तर महिनाको पहिलो आधा मा धेरै धेरै हावा छ। यसैले समुद्रमा साना छालहरू छन्, र तिमी घाममा असहाय गर्न सक्छौ।
तपाईं ढिला मेमा पौडी खेल्न सक्नुहुन्छ, समुद्री तापमान समुद्रमा पानी पुग्छ। कालो सागरमा, पानी चिसो छ - +1 ° सी।
अलानीमा सबै थोरी दिनहरू, दोस्रो स्थान एन्टिटा र पक्षमा। मौसम सुविधा दिन र रात बिर्सने मौलिक तापमान हो।
/ LI> aremer, एन्टिया, एन्टिलिया - days दिनको लागि US0 दिनको लागि, 720 अमेरिकी> 40000 अमेरिकी डलर सम्म, 70000 अमेरिकी डलर सम्म 11 दिनमा / UL><
हुनका लागि सब भन्दा सफलता मेडिटरेनेनन तटमा रिसोर्ट हो। महिनाको सुरूमा सब्सिस्ट अलाना, एन्टिलि र फीहिजी हुनेछ। अन्तको अन्त्यको नजिक मौसम प igned ्क्तिबद्ध भएको छ, र टर्कीका सबै शहरहरूमा मौसम सन्तुलित छ।
​​बीचमा, छुट्टीको लागि सब भन्दा लोकप्रिय अवधि बाँकी छ मिश्रीहरू हुन सक्छन्। मे 1 देखि मे 1 15 महिनाको दोस्रो आधा भन्दा 1-2-20% कम छ।
मेमा दुई साना बच्चाहरूसँग कहाँ जान? कुन कुरामा छनौट गर्न कि त्यहाँ न्यानो समुद्र थियो र बच्चाहरू पौडी खेल्न सक्छन्। कुन होटलमा बच्चाहरूको लागि एनिमेसन र राम्रो समुद्रको लागि एनिमेसन छ?
2। होटेलले शुक्रवार सबै प्रकारका बजारमा छ। E खरीद महँगो छ! यदि केहि छ र किन्न चाहानुहुन्छ भने, मॉर्मको मंगलबार (ट्याक्सी द्वारा min0 मिटर) जानुहोस् जसमा त्यहाँ सबै कुरा समान छ, केन्द्रीय वर्गको स्थल, केन्द्रीय वर्गको स्थल, केन्द्रीय वर्गमा (वा केवल सोध्छौं कुनै पनि बासिन्दाहरू, तिनीहरू सबै छन्। सबैजना रूसी भाषामा कुरा गर्दैछन्)।
3। एकका एक लहरलाई हाइलाइट गर्नुहोस् र उसलाई 1-2 $ .. यो पनि तपाईंलाई राम्रो भुक्तानी गर्नेछ, र तालिकाले उच्च स्तरमा लिनेछ (जहाँसम्म धेरै मर्मत गर्ने सेवा)
4। प्रेमीहरूका लागि राती खाए। र यसको बारेमा कसलाई बोल्दैन, तर बिहान 12 रात पछि, जहाँ तपाईं बेलुका बेलुकाको खाजा, डिनररहरूको डिनर र डिजाइनरहरूको खाना पनि काम गर्दछ, केवल स्वयं सेवा हुन्छ, तर यसले केही फरक पार्दैन!
कुल: सरासरवबाट प्रस्थान (I, मेरो पतिले एक बच्चालाई 1000 $ समात्यो, र यस्तै। योजनाबद्ध खरीदहरू, र यदि यदि केवल आराम र केहि पनि नठान्नुहोस्। तपाईसँग र मेरो आँखाको लागि $ 100 को बारेमा पर्याप्त!
शुभकामना, तपाईं पश्चाताप गर्नुहुने छैन। धनीले भन्नेछन् कि हाम्रो परिवार पिकरी छ र पहिले टर्कीको बारेमा पहिले सोचेको छ। तर पीउउुको बारेमा पहिलो सोच।
मा हामी एक सुखद पक्षबाट बस्यौं।
होटेल एक भयानक छ, म द्वारा देखेको व्यक्तिको सबैभन्दा डरलाग्दो दुर्घटना हुँदैन, तिनीहरू "तपाईं हामीलाई लाग्छ" साना सफाई, पहिलो सफाई छैन। दुई हप्तामा थियो जब म शपथ गएँ।
सबै भन्दा बढि भ्रमण गरिएको होटलहरू (सबै पछि, होटल सुरु हुन्छ र अन्तमा) शान्त, मद्दत गर्न, र धेरै मित्रैलो। सेप्टेम्बरमा कुरा गर्नुहोस्।
धेरै परिवारहरू वसन्त आरामका लागि टर्की छनौट गर्छन् - छोटो उडान, बच्चाको एनिमेसन र "सबै समावेशी" बच्चाहरूसँग यात्रुहरूको हातमा स्पष्ट रूपमा हुन्छन्। टर्कीको कस्तो रिसोर्टहरू मे र मेचाइमा पारिवारिक बिदाका लागि उपयुक्त छन्, 'मेटापोज समीक्षामा पढ्नुहोस्।
यदि गर्मी मा टर्की रिसोर्ट मा आराम गर्दा, तपाईं टर्की भ्रमण गर्न को लागी एक पूर्ण अपरिचित देश को लागी, ताजा, गिर्निया को भीड संग थकित छैन। प्रवाहको वसन्त आराम योग्य फाइदाहरू:
र अझै, टर्कीमा आराम गर्ने समीक्षामा, कहिलेकाँही, कहिलेकाँही उल्लेखित क्षणहरू। सबै भन्दा पहिले, यात्रीहरू मौसम र चिसो समुद्रको परिवर्तनको बारेमा गुनासो गर्छन्।
दुबै अभाव महिनाको पहिलो आधा को अधिक विशेषता हो, र त्यसपछि यो स्थिर गर्मी आउँछ, र पानी बिस्तारै घिसारिन्छ। त्यसो भए मौसमले मुडलाई बिगार्न सक्दैन, यो एक जोडी योजना गर्न र एक पौडी पोखरी संग एक जोडी फेला पार्नुको योग्य छ।
कहिलेकाँही पनि उल्लेख गरिएको छ कि होटलहरूको वसन्तमा त्यहाँ कुनै बच्चाको एनिमेसन हुन सक्छ। मिनी-क्लब सुरु हुन्छ जब मिनी-क्लब सुरु हुन्छ र बच्चाहरूलाई मेमा कसरी व्यवस्थित गरिन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा स्पष्ट पार्दछ। थप रूपमा, माई होटेलसँग सधैको लागि मर्मत पूरा गर्ने समय हुँदैन। कोठा बुकिंग गर्दा, यदि तपाईं समाप्त, वर्षहरू र सुधारको अन्य कामहरू रोक्नुहुन्छ भने पत्ता लगाउनुहोस्।
अर्को माइनस - मेजीको बिदामा पर्यटकहरूको भीड। यसले कम्तिमा टिकट, होटेल र तयारी-बनाएको भ्रमणको लागि उदयलाई बढेको छ, र आरामदायी आरामका साथ कति अधिकतम हस्तक्षेप गर्दछ। मेको दोस्रो भागमा यात्रा स्थगित गर्नु राम्रो हुन्छ।
अन्तत: यदि तपाईं समुद्र तट सुख्खा चाहनुहुन्छ भने, तपाईं एजियन सागरको रिसोर्टमा जानु हुँदैन। त्यहाँ ढिला वसन्तमा मध्यस्थतापत्रमा भन्दा कूलर छ, र समुद्री तटबाट सब भन्दा राम्रो मौसम जुन जून को अन्त्य मा स्थापित हुनेछ। त्यसो भए, विकल्पहरूको संख्या जहाँ टर्कीमा मेलमा आराम गर्ने, थोरै कम भयो। यो पत्ता लगाउने समय आएको छ कि भूमध्य धागोको रिसोर्ट के राम्रो छ।
<< p> मौसम टर्की रिसोर्ट्स मा मेन-जून मौसम जस्तै सम्मोहन: काम छोड्नुहोस्, यो समुद्रमा समय छ। यो सत्य हो कि यी महिनाको अवधिमा तापमान "तातो" बाट "धेरै तातो" बाट जान्छ, तर घामको फ्यानहरू विकल्पहरूको सम्पूर्ण दायरा खुशी हुन्छ।
मौसम स्टेशन एकदम आशावादी छ पूर्ण रूपमा मौसम वर्णन गरिएको छ, तर पर्यटकहरू यति असमान छैनन्। वसन्तको अन्तिम महिना चिसो ल्याउन सक्छ (त्यो हो, तापमान + 20 डिग्री सेल्सियसमा कमी आएको छ, हावा र भाग्यवश भुँइन्छ।
मौसममा टर्कीमा मौसम पहिले नै गर्मीमा छ, तर अझै तातो बिना नै। यदि यो चिसो समुद्रको लागि थिएन भने, यस समय पारिवारिक बिदाको लागि उत्तम भन्न सकिन्छ। के कपडा बच्चाको साथ टर्कीमा यात्रा गर्न को लागी? रिसोर्टमा मौसम बारे मा अधिक पढ्नुहोस्।
<< p> मे 2021 मा टर्कीमा आराम गर्न कहाँ जानुहुन्छ, जहाँ समुद्री दूरीमा पौंडी खेल्ने उपयुक्त हुन्छन? सबै भन्दा राम्रो समुद्र तट निर्देशनहरू विचार गर्नुहोस्, मौसम अवस्था, हामी मूल्यका लागि सबैभन्दा लाभदायक पर्यनहरू भेट्टाउनेछौं, के गर्ने भनेर जान्नुहोस्।
टर्की सबै अन्तर्राष्ट्रिय जटिलताहरू र अन्य विरोधाभासहरूको बाबजुद, हाम्रा मानिसहरूका लागि सब भन्दा आकर्षक फुर्सदको क्षेत्र मध्ये एक रहन्छ। टर्कीमा टर्कीमा समुद्र तट चार्जहरू सुरू हुन्छ, नियमित र चार्टर उडानहरू संगठित र सक्रिय छन्। पर्यटक सेवाको लागि मूल्यहरू द्रुत गतिमा बढिरहेको छ। तिनीहरूको प्रावधानको परिणामबाट आनन्द लिन तपाईंले धेरै सूक्ष्म र उपग्रहहरू अध्ययन गर्नु आवश्यक छ, जसको बारेमा।
यसको लागि प्रत्येक एक दशकका लागि मात्र यसलाई केवल वर्णन गर्न सम्भव छ। यो अझै पनि एक विशेष उल्लूत्विक अवस्था को एक विशिष्ट प्रभाव गर्न आवश्यक छ। तर यद्यपि, यो स्पष्ट रूपमा पत्ता लगाउन आवश्यक छ: मेलामा टर्की जाने ठाउँ कहाँ, जहाँ न्यानो छ र तपाईं पौडी खेल्न सक्नुहुन्छ? 1 देखि 10 संख्याको अवधि सभ्य मौसमको साथ छ। मेलिटलहरूमा, भूमध्यसागरीय तटनले रसियाबाट छुट्टीको समूहलाई भेट्छ। यो त्यस्तै धारणा हो कि मध्य पट्टीमा ग्रीष्म in तुमा गर्मी हो।